अपतटीय बैंकिंग र कम्पनी गठन, ट्रस्ट, सम्पत्ति संरक्षण योजना
अपतटीय निगमहरू, LLCs, न्यास र बैंक खाताहरू स्थापना गर्दछ।
Staff स्टाफ मा वकिल · 1906 देखि
१०० को मिलियन डलर सुरक्षित
शीर्ष अपतटीय न्यायक्षेत्र
अपतटीय खाता: कसरी र किन?
कानूनबाट सम्पत्तिहरू सुरक्षित गर्नुहोस्
Bulletproof सम्पत्ति संरक्षण
अपतटीय कम्पनी निर्माण
किन अफसोरको कम्पनी छनौट गर्नुहुन्छ?
1906 मा स्थापित
विश्वभरको सबैभन्दा ठूलो अफसोस प्रदायक
स्टाफ मा घर-अधिवक्ताहरू
भिडियोहरू बुझ्न सजिलो
सब भन्दा चाँडो अपतटीय कम्पनीहरु र खाताहरु
पूर्णता, ईमानदारी, भरोसाशीलता
विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण
24 /7प्रत्यक्ष व्यक्ति
नि: शुल्क अपतटीय सेवा परामर्श
पूर्ण-समय ग्राहक सेवा टीम
अपतटीय निगमहरू स्थापना,
LLCहरू, ट्रस्टहरू, र बैंक खाताहरू।
सबैभन्दा शक्तिशाली गोपनीयता कानुन र अपतटीय बैंकिंग क्षेत्रान्तरणले वित्तीय गोपनीयताको लागि साथै तलाक, लेनदेन, निर्णय र कानुनी व्यवस्थाबाट सम्पत्ति संरक्षणको लागि अनुमति दिन्छ।
अपतटीय कम्पनी रजिष्ट्रेसन
एक अपतटीय कम्पनी स्थापित गर्न र / वा तपाईंको कर्पोरेट ढाँचामा विदेशी क्षेत्रका प्राधिकरणलाई स्थानान्तरण गर्न तपाईले आफ्नो सम्पत्तिलाई कानुनी सुरक्षाबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक कदम चाल्न सक्नुहुन्छ, साथै, तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय कर ब्रेकहरूको फाइदा उठाउन र आफ्नो लगानी बढाउन सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइट अनुसन्धानको आधारमा आधारित छ र "ट्यूटोरियल कम्पनी" को निर्माण गरी चरण-दर-चरणमा मार्गदर्शन गर्न सक्ने एक ट्युटोरियलको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय संगठन स्थापना गरी तपाईंको व्यवसाय चलिरहेको दर्जनौं फाइदा पाउनुहुनेछ। को बजाय एक अपतटीय बैंक खाता को उपयोग गरेर, या एक स्थानीय खाता संग सम्बद्ध। उदाहरणका लागि, नेभिइस, केमैन टापु, पनामा, BVI र हङकङ, सबै धेरै लोकप्रिय अधिकार क्षेत्रहरू छन्। यसरी, हामी तपाईंलाई तपाईंको छनोटको निगम वा LLC स्थापित गर्न तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छौं। त्यसोभए, हामी तपाईंको व्यवसायको लागि एक बैंक खाता स्थापना गर्न र एक भर्चुअल अफसोस अपरेष्टार स्थापित गर्न मद्दत गर्न सक्छौं।
नेभिस LLC कानूनले केही अद्वितीय र प्रभावकारी सम्पत्ति संरक्षण सुविधाहरू प्रदान गर्दछ जुन कानूनका कानुनी बैंकहरूबाट तटस्थ बैंक खाताहरू सुरक्षित गर्दछ।
नि: शुल्क परामर्शको लागी कल गर्नुहोस्
तपाईंको कागजातहरू पेश गर्नुहोस्
कम्पनी र बैंक खाता खोलियो
अफशोर कर फायदाहरू
स्पष्ट गर्न, व्यवसाय अप्ठेरो गरेर कर छुट्याउन वा सरकारबाट पैसा राख्नु हुँदैन। यसबाहेक, यो स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी कानुनहरूको फाइदा उठाउनको लागि तपाईंको कामको बारेमा संरचनाको बारेमा हो। यी कानुनहरू जुन सबैलाई उपलब्ध छन् जसले उनीहरूलाई फाइदा लिन प्रयोग गर्दछ। यसैले, हामी तपाईंलाई आफ्नो व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय स्तर निर्धारण गर्न पूर्ण कानूनी र वैध तरिका देखाउन सक्दछ ताकि तपाईं सम्पत्ति संरक्षणको लागत बचत गर्नका लागि पुग्ने लाभहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ।
यूएस, यूके, अष्ट्रेलिया र केहि अन्य देशका व्यक्तिहरू, द्वारा र ठूलो, विश्वभरमा कर लगाईएको छ आय। अर्कोतर्फ, तपाईले सम्भव छ कि एप्पल, Google र अन्यले विदेशी संरचनाको प्रयोग गरेर पूर्णतया कानुनी प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो कर बिललाई हराएको छ। यसबाहेक, अपतटीय कैदीको बीमा कम्पनी अर्को तरिका हो जुन हाम्रो क्लाइन्टहरूले आईआरसी 953 (डी) र 831 (बी) अन्तर्गत आफ्नो कर बिललाई कानूनी रूपमा हराएको छ। तदनुसार, त्यहाँ तरिकाहरू छन् जुन तपाईं पनि यो गर्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो सहायता र उचित इजाजत पत्रदाता पेशेवरहरूको मार्गदर्शन।
हामी अन्तिम बिन्दुमा पर्याप्त जोड दिन सक्दैनौं। अफशोर ट्याक्स बेनिफिटहरू कानूनको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रहरू हुन्। त्यसकारण, तपाईंले कर प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिहरू प्रयोग गर्नु अघि, यो निश्चित हुनुहोस् कि तपाईं केवल कुनै सीपीएसँग कुरा गर्नुहुन्न। एक लेखाकार र / वा कर वकील संग कुरा गर्नुहोस् जो नागरिक र नागरिकहरु लाई विदेशी आय संग मद्दत गर्न विशेषज्ञता दिनुहुन्छ। तपाईं उडान र colors्गका साथ अडिट पास गर्न धेरै धेरै सम्भावना हुनुहुन्छ। साथै, तपाईं राती पनि सुत्नुहुनेछ।
अनलाइन कम्पनी गठन
एक असाधारण सफल रणनीति तपाइँको अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गर्न अपतटीय कम्पनीमा प्रयोग गर्नु हो। यो पनि एप्पल र Google द्वारा प्रयुक्त प्रविधि हो। यदि तपाईंको व्यवसाय अनलाइनमा आधारित छ र तपाईले तपाइँको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ठीकसँग जोड्नुहुन्छ भने, यससँग केही धेरै आकर्षक कर लाभ हुन सक्छ। उदाहरणका लागि यो आईआरए जस्तै जस्तो कर भुक्तानीहरू हटाउन सक्छ। यो एक महत्त्वपूर्ण सीपीए को कर सल्लाह छ कि यो रणनीति को प्रयोग मा मार्गदर्शन गर्न को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। करहरू मा पैसा बचत गर्न यी उपकरणहरूको प्रयोग अन्य अभिनेताहरूको बीचमा तपाईंको देशको निवास र नागरिकता र कम्पनीको स्वामित्वको प्रतिशतमा निर्भर हुन सक्छ। त्यसोभए यो केवल अनुभवी कर सल्लाहको निर्देशनमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
एक अनलाइन व्यापारमा एक वैश्विक ग्राहक आधार हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, के तपाईं आफ्नो ग्राहक आधार 22 समय गुणा गर्न चाहनुहुन्छ? युएस बाहिरको जनसंख्या 22 पटक भित्र भन्दा ठूलो छ। बेलायतका विश्व जनसंख्या 109 समय भित्र भन्दा ठूलो छ, क्यानाडा बाहिर 200 भन्दा ठूलो र अष्ट्रेलियाका बाहिर 304 समय। तपाईंले विचार पाउनुभयो। किन तपाईंले आफैलाई पुरानो फैशनमा भौगोलिक रूपमा अवरोधित व्यवसायिक मोडेललाई सीमित गर्नुपर्छ? नतिजा, एक अपतटीय कम्पनी र अपतटीय बैंक खाता स्थापना गर्न को लागी तपाईंको अनलाइन व्यवसाय चलाउन देशको बाहिरको गति निर्माण गर्ने एक राम्रो तरिका हुन सक्छ जसमा तपाई अवस्थित हुनुहुन्छ।
मुकदमा दावी गर्ने मिनेट भित्र एक वकीलले तपाईंको बैंक खाता, तपाईंको घर, तपाईंको व्यवसाय र अन्य सम्पत्तिलाई ठुलो अर्को कागजात फाइल गर्न सक्छ। तथापि, एक व्यवसाय अपतटीयले तपाईंको कडा अर्जित स्रोतहरू फ्रिज र साइज गर्न भिजिट ल्यापटप क्षमताको ठूलो बाधा माथि राख्छ।
आयको बहुविध स्ट्रीमहरू
के हो भने तपाइँको स्थानीय कम्पनीले कठिन समयहरुमा दौड्छ? 2008, 2009 र पछिल्लो वर्षको अमेरिकी र युरोपेली मंदी सम्झनुहोस्? त्यस समयमा, दक्षिणपूर्व एशिया र अष्ट्रेलियाको अर्थव्यवस्था बढ्दै गयो। एक अपतटीय पैसा मेशिन गरेर, तपाईं आफ्नो अर्थव्यवस्था स्थानीय अर्थव्यवस्थामा सीमित गर्नुहुन्छ।
किन बहु ग्लोबल अनलाइन व्यवसाय एकै साथ चलिरहेको छैन?
धेरै अपतटीय कम्पनीहरू र खाताहरू स्थापना गर्न कम लागत, साथै नयाँ कम लागतको वेबसाइट विकास सेवाहरूको साथ प्रारम्भिक लगानी जबरजस्ती उल्टो सम्भावनाको तुलनामा बाल्टिनमा मात्र एक ड्रप बनाउँछ। हाम्रो संगठनले यी सबै सेवाहरू प्रदान गर्दछ, र हजारौं ग्राहकहरूको लागि छ। यदि किसानले बाली उठाउन चाहन्छ भने उसले पहिले बीज रोप्नु पर्छ। सबै बीउहरू बढ्दैनन् तर उनीहरूमध्ये धेरैले बढ्छ; र गर्नेहरूले उनलाई र उनका परिवारलाई धेरै पुस्ताका लागि बाँच्न सक्छ।
कम्पनी 1906 मा सुरु भयो। हामी अपतटीय वित्तीय सेवा र मुकदमाबाट सम्पत्ति सम्पत्तिको बारेमा भावुक छौं। हाम्रो कम्पनीले नेविस, कुक टापु र डोमिनिकामा कानूनलाई योगदान दिएको छ। हाम्रो कम्पनीको सिद्धान्तहरू नियमित रूपमा राज्यका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो ग्राहकहरूको सर्वोत्कृष्ट हितमा कानुनीकरणलाई प्रभाव पार्छ।
हामी कानून लेख्छौं
अफशोर कम्पनीले नेविस, कुक टापु, डोमिनिका र कo्गोमा कानून बनाउन योगदान गर्यो। हामी नियमित रूपमा राष्ट्र प्रमुखहरूसँग उनीहरूको नियामक ढाँचा सुधार गर्न भेला हुन्छौं।
भान्स एमोरी, नेविसको प्रीमियरको साथ हाम्रो सीईओ (1992 - 2006 र 2013 - 2017)
हाम्रो सीईओ रोोस्वेल्ट स्करर संग, डोमिनिका को प्रधान मंत्री
क्लेमेन्ट मौउम्बा, कंगो गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री (ब्राजाभिल) र हाम्रो अधिवक्ता योनाथन एम्सेलेमको साथ हाम्रो सीईओ
मार्क ब्रान्टली, नेविस (2017- वर्तमान) को प्रीमियर संग हाम्रो सीईओ
अन्तिम अपडेट नोभेम्बर २ 26, २०२० मा भयो
हामी ग्राहकहरूको मूल्यांकन गर्छौं
उत्कृष्ट काम, तपाईंको सबै प्रम्प्ट सेवाको लागि धन्यबाद।
- रॉन एन्ड्रयूज
मैले भर्खरै अनलाइन फारम पूरा गर्दछु र मेरो दस्तावेजहरू विशेषज्ञ द्वारा नि: शुल्क परामर्शको साथ ड्राफ्ट गरिँदैछ।
- क्रिस कलिन्स
म भन्न सक्दछु म पूर्ण रूपमा सेवाको गुणस्तरबाट प्रभावित छु। असाधारण !!! हामीले कम्पनीको कागजातहरू र EIN र आज बिहान राज्यपालको कार्यालयबाट स्वीकृति पत्र पनि प्राप्त गर्‍यौं। खुशी हुन सकेन। म सबैलाई थाहा दिनेछु कि तपाई कुन ठूलो कम्पनी हुनुहुन्छ। धन्यबाद, रॉन र रोक्सी ए।
- रन र रोक्सी ए
अपतटीय कम्पनी व्यवसायिक उपकरण प्रयोग गर्दै, मैले मेरो व्यापार आय र व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई सम्भावनापूर्ण विनाशकारी मुक्तिबाट सुरक्षित गरे।
- बिल रोजर्स